Mid Kamida Wadamada Latin Amerika Oo Laga Helay Beedadkii Ugu Badnaa Ee Xayawaanka Dinasoor-ta
Xukuumadda oo Gargaarkii ugu Horreeyey Gaadhsiisey Dadkii Ku Tabaaloobay Roobabkii Duufaannada Watay
Wasaaradda Shaqada oo Bilawday Quudinta Dadka Maskaxda ka Xanuunsanaya iyo Derbi Jiifka
Madaxweyne Muuse oo Ardayda Jaamacadda Hargeysa Faray in ay ka Qayb Qaataan Gurmadka Samato Bixinta
Dawladda Imaaradka Carabta oo ka soo Jawaabtay Codsi Xukuumaddu u Diray
Magacyada Guulaystayaasha Barnaamijka Kobci Garaadkaga
Wasiirka Maaliyada oo Noqday Masuulkii ugu Horreeyay ee Baabiiyay Qasnaddii Guud ee Lagu Cuni Jiray Hantida Umadda
Xarun Nooceedu ku Cusub Yahay Somaliland oo Laga Hirgeliyay Hargeysa
Dawladda oo la Wareegtay Maamulka Shaybaadhka Shidaalka Berbera
Mashruuca Dib u Habaynta Maaliyadda Qaranka oo laga Furay Hargeysa
Madaxweyne ku xigeenka oo ka Hadlay Shaqaaqada Ceel-afweyn Farriinna u Diray Beesha Caalamka
Kooxo baadheyaal ah , kuna xeel dheer cilmiga baadhitaanada taariikhihii hore ayaa dalkaasi Argentin ka helay beedadka xayawaanka loo yaqaaney Dinosaur-ta , kuwaas oo halkaasi ku aasnaa sannado lagu qiyaasay ilaa 70 million oo sanno .
Mid kamid ah khubaradan ayaa ah mid sannado ka hor degaanka Oka Mahavevo oo ku yaala Koonfurta Patagonia gobolka lagu magcaabo ka helay mid kamid ah beedadkaasi Dinosaur –ta .
Wargeyska Daily Mail oo uu wargeyska Dawan warbixintan kazoo xigtay ayaa agaasimaha Dhaqanka ee wadankaasi Argentin Claudia Della Negra ku daabacay warbixintan, isaga oo sheegay in toddobaadkani ahaa mid ay heleen beedadkii ugu badnaa ee xayawaankaasi Dinosaur-tu lee yahay .
Maaha baadhitaankani kii ugu horeeyey ee waxa sidan oo kale beedad tiro badan gobolkaasi looga helay sannadkii 1997 kii .
Goobtan ayaa ah meel biyo mareen ah , sidoo kalena caan ku ah dabka loo yaqaano Folkaanaha, iyada oo meesha laga helay beedadkaasi ay ahayd meel ay biyuhu ciid aad u badan dhigeen , kuwaas oo qariyey beedadkaasi.
Dawlada dalkaasi Argentin ayaa sheegtay inay goobtan ka dhigi doonto goob ay yimaadaan dalxiiseyaashu, iyada oo la xidhi doono loona samayn doono cid ilaalisa.
Sannadkii 2014 kii ayaa khubaro reer Argentina ahi ay gobolkaasi Patagonia ka heleen lafo waaweyn oo ay ku sheegeen inay ahayd Dinosaur- tii ugu weynayd ee la helo caalamka, taas oo la dhigay goob masxaf ah.
Beedadkan ayaa ah 77 tan , wxaanay ku jireen dhul dhan ilaa 20 meter, sidoo kalena waxa goobta laga helay lafo dherer ahaan gaadhaaya ilaa 40 meter oo aan weli la baadhin.